Olee otú Ọkụ BitComet na FrostWire nkiri na DVD d
> Resource> Video> Olee otú iji tọghata na Ọkụ BitComet / FrostWire Movies ka DVD
Ugbu a BitTorrent bụ a nnọọ nkịtị na-ewu ewu faịlụ-nkekọrịta protocol. BitComet na FrostWire abụọ nke BitTorrent ahịa dị ibudata. Iji tọghata bitcomet na frostwire nkiri na DVD-aghọ a nkịtị ina. Ebe a anyị nwere ike ikwu a BitComet na FrostWire ka DVD burner - Wondershare DVD Creator,-enyere gị aka ọ na-eme na.
Nke a na usoro atụmatụ elu ọkụ ọsọ na magburu onwe mmepụta mma. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike tọghata BitComet ka DVD na Wondershare DVD Creator for Mac. Ha na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ahụ. Na n'okpuru nzọụkwụ, anyị na-ewe Windows screenshot. Dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
Olee otú iji tọghata BitComet na FrostWire ka DVD nzọụkwụ site nzọụkwụ
Nzọụkwụ 1. mbubata gị isi iyi fim
Pịa "Import" ka ịgbakwunye BitComet fim ị mkpa ọkụ ka DVD n'ime DVD Creator. Ịdọrọ na dobe ha ka ha hazie video usoro. N'oge usoro, ị nwere ike hazie gị vidiyo site cropping, trimming, n'usoro n'usoro, wdg ka na-amasị gị aka gị videos ozugbo. Ugbu a, i nwekwara ike mbubata photos ka foto DVD ngosi mmịfe.
Nzọụkwụ 2. Họrọ a DVD menu na hazie ya
40 free DVD menu ndebiri na-nyere ọzọ ndị ọkachamara DVD achọ. I nwekwara ike hazie DVD menu thumbnails, ndabere oyiyi, buttons, wdg ka amasị gị. Ọ bụrụ na ị na-achọghị iji nweta a DVD menu, dị họrọ "Ọ dịghị NchNhr".
Nzọụkwụ 3. Preview na ọkụ BitComet / FrostWire ka DVD
Ịhụchalụ n'ihi nke edezi bụrụ na i nwere ike mma ya na a ụfọdụ ụzọ. N'ikpeazụ, mgbe niile bụ OK, ị nwere ike dị nnọọ pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ.
Na ọrụ Wondershare DVD Creator, ị ga-ahụ ya mara mma mfe iji tọghata bitcomet na frostwire faịlụ ka dvd mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ-ekiri ihe nkiri gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Banyere BitComet na FrostWire
BitComet: The BitComet mmemme a BitTorrent ọgbọ na-na-ọgbọ (P2P) faịlụ-nkekọrịta omume, nakwa dị ka a multi-threaded multi-protocol ngwakọ download faili. Ọ na-akwado imekotaotuugbo download. N'ihi na nke a, ọ nwere ike ise akụkụ nke faịlụ site na ọtụtụ isi mmalite gafee dị iche iche P2P / Client-nkesa ogbugba ndu, na mezue a akpan akpan download rụọ ọrụ nke ọma.
FrostWire: FrostWire bụ onye ọgbọ na-ọgbọ faịlụ nkekọrịta ngwa maka BitTorrent na Gnutella ogbugba ndu. FrostWire e dere Java. Ma ọ bụ a ndụdụ nke LimeWire na ọzọ na-ewu ewu Gnutella ahịa ebe ọ na mbụ mụrụ. Ọ bụ kpam kpam free si virus na spyware na iTunes mwekota.
Olee otú Play FLV on Mac na Free FLV Players maka Mac